စတား Trader EA ၏ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း - အကောင်းဆုံး Forex EA ရဲ့ | ကျွမ်းကျင်သူ Advisors အကြံပေးအဖွဲ့ | FX စက်ရုပ်
ပင်မစာမျက်နှာစတား Trader EA ၏စတား Trader EA ၏ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
အကောင်းဆုံး Forex EA'S | ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး | FX စက်ရုပ် စတား Trader EA ၏ 1
စျေးနှုန်း: $197 (Price for 1 YEAR LICENCE, FREE UPDATES & FULL VENDOR SUPPORT)
မှတ်စု: ရရှိနိုင်ပါစတား Trader ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး၏2ကွဲပြားခြားနားသောအစီအစဉ်များကိုအခုအချိန်မှာရှိပါတယ်:
- 1 နှစ်၏လိုင်စင်။ အသေးစိတ်လက်စွဲစာအုပ်၊ အကောင်းဆုံးချိန်ညှိချက်များ၊ အခမဲ့မွမ်းမံမှုများနှင့်ရောင်းချသူ၏ပံ့ပိုးမှု၊ ပုံမှန်စျေးနှုန်း - ၂၄၇ ဒေါ်လာ
- တစ်သက်တာလိုင်စင်။ အသေးစိတ်လက်စွဲစာအုပ်၊ အကောင်းဆုံးချိန်ညှိချက်များ၊ အခမဲ့မွမ်းမံမှုများနှင့်ရောင်းချသူ၏ပံ့ပိုးမှု၊ ပုံမှန်စျေးနှုန်း - ၂၄၇ ဒေါ်လာ
စတား Trader EA ၏ ပြန်လည်သုံးသပ် - Metatrader4အတွက်အမြတ်အစွန်း Forex ဆိုင်ရာအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်
စတား Trader EA ၏ တစ်အမြတ်အစွန်းနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောဖြစ်ပါသည် FX ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကုန်သည်အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီး လန်း Hunterမူလကအရာ ရေရှည်များအတွက်ဒီဇိုင်း, နှေးနှေး, တည်ငြိမ်အကျိုးအမြတ် စျေးကွက်အခြေအနေများကြားမှ။
စတား Trader EA ၏ ပေါ်ပြေး EURUSD နှင့် USDJPY currency pairs on 1 hour time frame. It's based purely on RSI & CCI, ကုန်သွယ် overbought နှင့် oversold ဇုန် ပိုမိုမြင့်မားသောအချိန်ဘောင်ပေါ် လက်ရှိမက္ကရိုလမ်းကြောင်းသစ်နှင့်အတူ aligned.
ဤ Forex စက်ရုပ် နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်အဆိုပါ Brexit ကာလအတွင်း TickData သုံးပြီးစမ်းသပ်စစ်ဆေးခဲ့သည်။ အဆိုပါ developer များကအကောင်းဆုံးတည်ငြိမ်မှုနှင့်အမြတ်အစွန်းအဘို့အ Metatrader 99.90 (MT4) တွင် 4% optimization အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။
ထိုကာလကျော်, အကောင့်ကို 2000 pips အကြောင်းကိုသွားလေ၏။ သို့သော်ငြားလည်း, ကပျမ်းမျှအားဖြင့်တစ်လလျှင် 500-1000 pips ရရှိခဲ့,2လအတွင်း။ ယေဘုယျအား, တကအပြုသဘောပြန်လာ posted!
အဆိုပါမဟာဗျူဟာဖြစ်ပါတယ် FIFO ကိုက်ညီ, အဘယ်သူမျှမစောင်ရန်းအပေါင်းတို့နှင့်တကွ, သြဇာအကောင့်နှင့်အတူလိုက်ဖက်။ အဆိုပါစတားကို EA ၏ installation နဲ့ setup ကိုအလွန်လွယ်ကူစွာအောင်မြင်သောဖြစ်ပါတယ်။
စတား Trader EA ၏ သင်အောင်မြင်မြင်ချင်သူကိုကုန်သည်တွေအနေနဲ့ကျွမ်းကျင်သူအဖွဲ့ကတီထွင်ခဲ့သည်!
စတား Trader EA ၏ - Forex Trading နှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်သည်မဟုတ်လော
၏အသုံးပြုမှုကို Make စတား Trader EA ၏ နှင့်ရွှေသို့သင်တို့၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုဖွင့်!
စတား Trader EA ၏ - အကြောင်းမကြားရဘူး Forex Trading ၏ ခင်မှာစက်ရုပ်?
မည်သည့်ကြိုးစားအားထုတ်မှုမပါဘဲလွယ်ကူသောပိုက်ဆံဘာသည် စတား Trader EA ၏ အားလုံးအကြောင်းပါ။ ဘောင်, အကြေးခွံနှင့်သင့်ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုမှာကန့်သတ်သငျသညျပေးခဲ့ကြပြီးနောက်, စက်ရုပ်ကျော်ကြာနှင့်သင်တို့အဘို့အရောင်းအပေါငျးတို့သကိုင်တွယ်။ ဤသည်အဖြစ်ကောင်းစွာအခြားအရေးကြီးကိစ္စရပ်များပေါ်တွင်သင်၏စွမ်းအင်အာရုံစိုက်နေချိန်တွင်ထိန်းချုပ်မှုယူရန်သင့်အားခွင့်ပြုထားသည်။
အဆိုပါ စတား Trader EA ၏ ညဥ့်အစည်းအဝေးများကာလအတွင်းအမြတ်အစွန်းလဲလှယ်ခွင့်အလမ်းများကိုရှာဖွေ 24 /5ပေါ်နှင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်ကျန်ရှိနေပါတယ်။ သင်ကကို turn off မဟုတ်လျှင်ဒီတော့သင်ကတစ်ခုတည်းအကျိုးအမြတ်ကုန်သွယ်မှု option ကိုလက်လွတ်မည်မဟုတ်။
ကျွန်တော်တို့ကိုလူသားတွေအတွက်အမတူဘဲ စတား Trader EA ၏ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမတည်ငြိမ်မှုများကငျးမဲ့သည်နှင့်သာလုံးဝ Calculator ပတ်ဝန်းကျင်တွင်အလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။
စတား Trader EA ၏ - ထရေးဒင်း Logic, Setup ကိုထိုအခြားလိုအပ်ချက်များအကြောင်း
စတား Trader EA ၏ အချို့သောနာရီအတွင်းအရောင်းအ, လာမယ့်စုံတွဲနာရီသို့မဟုတ်နေ့ရက်ကာလအဘို့စျေးနှုန်းညှနျကွားခပိုင်းခြားသုံးသပ်ပြီးဆုံးဖြတ်သည်။ ဒါ့အပြင်ဒီကျွမ်းကျင်သူအကြံပေးသင်သတ်မှတ်ထားတဲ့အန္တရာယ်များနှင့်နှစ်လိုဖွယ်အမြတ်အစွန်းနှင့်အတူကုန်သွယ်ခွင့်ပြုသည်။ အဆိုပါကုန်သွယ်မှုစနစ်ကြီးမြတ်အမြတ်အစွန်းရရှိမညျနှင့်နေ့တိုင်းအရောင်းအဖွင့်လှစ်။
ဤ FX စက်ရုပ် အပေါ်အရောင်းအဝယ်ဖြစ်များအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ် EURUSD နှင့် USDJPY ငွေကြေးအားလုံး။ ကျနော်တို့ကနေစစ်မှန်တဲ့ ECN အကောင့်အကြံပြု WELTRADE, ThinkForex, သို့မဟုတ် (အမေရိကန်ကုန်သည်များအတွက်) FXChoice $ 1,000 ၏နိမ့်ဆုံးအကောင့်အရွယ်အစားနှင့်အတူ။ သငျသညျ၏သင်တန်းသေးငယ်တဲ့အကောင့်ကိုသုံးနိုင်သည်, ဒါပေမယ့်သူကအကြံပြုသည်မဟုတ်။
သင်သည်သင်၏အကောင့်ထဲမှာနေရာချတိုင်း $ 1,000, ကြှနျုပျတို့ 0.01 အများကြီးသုံးပြီးအကြံပြုပါသည်။ သငျသညျ $ 2,000 ငွေသွင်းမယ်ဆိုရင်ဒါကြောင့်ဥပမာ, ထို့နောက် 0.02 စာရေးတံကိုသုံးပါ။ သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည် 5,000 စာရေး $ 0.05 ငွေသွင်းလျှင်။ နောက် ... ပြီးတော့။ ရိုးရှင်းစွာအောက်တွင်စာရေးတံအရွယ်အစားကိုသတ်မှတ် လောတ input ကို setting ကို။
သင်တို့သည်လည်းညှိလို့ရပါတယ် AutoLotOptions စစ်မှန်တဲ့ရန်သင့်အားအလိုအလျောက်ရန်စနစ်ချင်လျှင်သင်တို့အဘို့စာရေးတံအရွယ်အစားကိုတိုးမြှင့်။ သတိထားသုံးပါကဒီ $ 01 နှုန်း .1,000 စာရေးထက်ပိုမိုမြန်ဆန်မှုနှုန်းမှာအများကြီးအရွယ်အစားကိုတိုးပွါးစေသောကြောင့်ငါတို့သည်မမှန်သောအကြံပြုပါသည်။ သင်တစ်ဦး adrenaline junky ဖြစ်ကြပြီးမြင့်မားတဲ့အန္တရာယ်ကိုချစ်လျှင်, သငျသညျသင်တန်းပိုကြီးအများကြီးအရွယ်အစားအဘို့အသွားနိုင်ပါတယ်။
ထိုအတူပျက်ကွက်အလွန်စိတ်ပျက်ဖွယ်အခွင့်အလမ်းတွေကိုရှိပါတယ် စတား Trader EA ၏ ဒီကုန်သွယ် software ကိုအာမခံမယ့်များ၏ဖန်တီးသူဖြစ်သောကြောင့် 78% အောင်မြင်မှုနှုန်းထက်ကိုပိုပြီး နှင့်လည်းအတည်ပြုထားသောရလာဒ်များပေးလိမ့်မည်။
ပေါ်လစီပြန်အမ်း: သင်ဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုတာငါတို့အတွက်အရေးကြီးတယ် စတား Trader EA ၏ မင်းအတွက်ကောင်းတဲ့အံဝင်ခွင်ကျတစ်ခုပါ။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ရောင်းချသူအားမည်သည့်အကြောင်းကြောင့်မဆိုခြွင်းချက်မရှိရက်ပေါင်း ၃၀ ပြန်လည်ပေးဆပ်ရန်အာမခံချက်ထည့်သွင်းရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်။
စတား Trader EA ၏ မယုံနိုင်စရာစျေးနှုန်း, ဆိုလိုသည်မှာသာ $ 197 မှာချက်ချင်းမရရှိနိုင်ပါသည်။ ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့မိတ္တူဖမ်းပြီးမှမစောင့်ကြဘူး!
အဆိုပါတရားဝင်စတား ​​Trader EA ၏ website ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှု
နေ့စွဲ Start: မေလ 12, 2018
တရားဝင်စတား ​​Trader EA ၏ဝက်ဘ်ဆိုက်
ကြယ်ပွင့်ကို EA ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
စတား Trader ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး
စတား Trader Forex စက်ရုပ်
စတား Trader ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
စတား Trader စနစ်
STAR ကုန်သည်များကို EA - METATRADER4performance UPDATE အကျိုးအမြတ်ရ Forex ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး: + 2.1% MONTHLY Return (အစစ်အမှန်ငွေ ACCOUNT ကို!) ချစ်ခင်ရပါသောသူချင်း Forex ကုန်သည်, သတင်း! စတား Trader EA ၏ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း - အမြတ် Forex ကျွမ်းကျင်သူ Metatrader4များအတွက်အကြံပေးကဒီမှာပိုပြီးသတင်းအချက်အလက်နှင့်ဆုကြေးငွေ Get ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသူ: https://www.bestforexeas.com/star-trader-ea-review/ စတား Trader EA ၏တစ်အမြတ်အစွန်းနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသော FX ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေးနေသူများကဖန်တီး မူလကစျေးကွက်အခြေအနေများကြားမှရေရှည်, နှေးနှေး, တည်ငြိမ်အကျိုးအမြတ်များအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲသောပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကုန်သည်လန်း Hunter က။ သငျသညျပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကုန်သည်များဘဏ္ဍာရေးစျေးကွက်ကနေသူတို့ရဲ့အမြတ်ထုတ်ယူအစားအမှန်တကယ်သူတို့ကိုယ်သူတို့အရောင်းအဝယ်ဖြစ်များအတွက် software ကိုနည်းပညာ ပို. ပို. အသွင်ရောက်အောင်ကြိုးစားကြကြသည်ကိုငါတို့သိကြ၏သလား? စတား Trader EA ၏ပြေး... ဆက္ဖတ္ရန္